Timo Werner Childhood Story Plus nozaraina momba ny tantaram-piainany
Home TOROHEVITRA FOTOTRA EUROPEAN Mpilalao Football Alemanina Timo Werner Childhood Story Plus nozaraina momba ny tantaram-piainany
Ny tantaram-piainanay momba an'i Timo Werner dia milaza aminao ny zava-misy momba ny tantaram-pianakaviany, ny fiainany tany am-boalohany, ny ray aman-dreny, ny mpianakavy, ny sakaiza, ny vadiny, ny ankizy, ny fiara, ny mendrika ary ny fomba fiainany.
Raha tsorina, LifeBogger dia manome anao famotehana tanteraka ny fiainany manokana, manomboka amin'ny fahazazany hatramin'ny taona lasa lasa Malaza. Ny sarin'ny fivoarany hatramin'ny fahazazany hatramin'ny fahazazany dia milaza ny tantarany Bio.
Eny, izaho sy ianao dia mahalala fa ny Alemanina dia mpanatratra tanjona kendrena, zava-dehibe kokoa, iray amin'ireo mpitokona haingana indrindra any Eoropa izay manana tahan'ny tanjona tsy mampino isaky ny ambaratonga. Na eo aza ny fankalazana dia mpankafy baolina kitra vitsivitsy monja no nanokana fotoana hamakiana ny tantaran'i Timo Werner's Bio. Izahay dia nanomana izany ho anao irery ary tsy mila ado intsony, andao atomboka amin'ny tantaran'ny fahazazany.
Timo Werner tantaram-pianakaviana:
Ho an'ireo vao manomboka ny tantaram-piainana, 'Turbo Timo' no anaram-bosotra alemanina. Timo Werner dia teraka tamin'ny andro faha-6 tamin'ny volana martsa 1996 tamin'ny reniny, Sabine Werner ary ny rainy, Günther Schuh ao amin'ny tanànan'i Stuttgart, atsimo andrefan'ny Alemana.
Ny mpilalao baolina kitra dia teraka tsy nanan-drahalahy na ranabavy, izany hoe izy irery no zanakalahy naterak'ireo ray aman-dreniny. Angamba ianao efa nieritreritra hoe… Maninona izy no tsy mitondra ny anaram-bosin'ilay rainy- 'Schuh'. Ny marina dia, ny ray aman-drenin'i Timo Werner na dia niaraka elaela aza izy ireo dia toa tsy nanambady ara-dalàna. Noho io antony io, ilay mpilalao baolina kitra dia mitondra ny anaran'ny reniny 'Werner'.
Timo Werner Fiainam-pianakaviana:
Ny dadan'ny Alemanina, Gunter Schuh, dia nitantana tokantrano antonony iray tao Stuttgart. Izy io dia trano izay mandraka ankehitriny, manana soatoavina avo lenta amin'ny fanabeazana ny tanora. Timo Werner dia avy amin'ny fiandohana am-panetren-tena ao an-tranony miavaka.
Lehibe ny ray aman-dreniny ary nampianatra azy soatoavina ara-pitondrantena efatra tsara. Anisan'izany; (1) fanajana ny rehetra (2) fahalala-tanana / fanampiana (3) fananana fahatsapana andraikitra (4) tsy handratra olona na oviana na oviana ary (5) famolavolana ny fahazarana mizara.
Miresaka momba ny fitaizany tamim-panetren-tena izay maneho ny toetrany ankehitriny, hoy i Timo Werner tamin'ny media alemà indray mandeha;
Rehefa miaraka amin'ny fianakaviako sy ny namako aho dia tsy Timo Werner mpilalao baolina kitra. Timo tsotra fotsiny aho, ilay zanaka manetry tena ary namana mahatoky.
Ny marina dia, lehilahy toa ny olon-drehetra aho. Raha manao zavatra tsy mety aho dia tsy matahotra ny hilaza amiko ny ray aman-dreniko sy ny namako!
Fiandohan'ny fianakaviana Timo Werner:
Fantatsika rehetra fa mpikomy alemanina be zotram-po izy, na izany aza, tsy ny rehetra no mahalala hoe avy aiza izy avy any Alemana. Ny fianakavian'i Timo Werner dia niavian'ny Stuttgart, renivohitry ny fanjakana atsimo andrefan'ny Baden-Württemberg.
Raha tsy fantatrao dia mitondra anaram-bosotra hoe "cradle of the automobile" ny tanàna. Fantatrao ve?… Stuttgart no misy ny foiben'i Porsche sy ilay Mercedes-Benz tsitoha.
Voalohany indrindra, ny ray aman-drenin'i Timo Werner- indrindra ny dadany dia hita ho injeniera voalohany amin'ny anjarany. Ny mpilalao Football dia mpilalao baolina kitra amateur izay lasa mpanazatra taty aoriana. Tamin'ny naha zazalahy kely azy dia nampianatra azy ny dikan'ny fiaretana i Günther Schuh, dadan'i Timo Werner. Tany am-piandohan'ny androny dia namela ny zanany lahy tokana hihazakazaka hatrany amin'ny tendrombohitra izy amin'ny anaran'ny fanatsarana ny tanjany sy ny atletisma.
Amin'ny maha-zazalahy kely manetry tena izay namboly tsara, dia nanana ny fisainana te-hampiaiky volana ny Rainy i Timo, izay hitan'ny maro (indrindra ny mpianany) ho mpanabe manana hery mampianatra "mampatahotra".
Tamin'ny andro taloha, rehefa nihazakazaka tontolo andro i Timo dia nanontany an-drainy isaky ny am-pofoany hoe hafiriana izy. Ny fihazakazahana hatrany an-tendrombohitra dia nahita an'i Youngster mivelatra amin'ny fahefany hafainganam-pandeha izay nanjary iray amin'ireo fananany lehibe indrindra androany.
Mario Gomez- Ny maherifo amin'ny fahazazana:
Günther Schuh dia nitarika ny zanany lahy ho mpanafika, zava-bita iray izay nanome azy fotoana fakan-tahaka modely ho an'ny olona Mario Gomez, ilay alemanina teo aloha. Tamin'izany fotoana izany (talohan'ny taonan'ny fahatanorany) dia nametaka ny afisikan'ilay Striker Alemanina eraky ny efitranony i Timo. Mampihomehy, tsy fantany fa izy no hisotro ronono amin'ny maherifony (Mario Gomez) avy amin'ny ekipa nasionaly alemanina.
Rehefa nihalehibe izy dia nisy antoka azo antoka fa ny baolina kitra no ho antsoiny. Mahaliana fa ny rainy Günther Schuh dia namela ny zanany lahy hisoratra anarana tamin'ny TSV Steinhaldenfeld, klioba iray izay nampianariny ny ekipa zandriny ambonimbony kokoa. Te hampiaiky volana azy ilay lehilahy notadiaviny indrindra- ny rainy. Timo Werner kely, izay sary etsy ambany dia nanomboka tany ifotony.
Tetika famporisihana ny ray:
Tao anatin'ny fikasana hahita azy ho ambony dia tsy maintsy nampihatra ny antony ara-bola ny dadan'i Timo ho paikady ilaina hijerena ny fandrosoan'ny zanany lahy. Ny marina, ny tanora dia nankafy fanentanana kely avy tamin'ny ray aman-dreny (bebe kokoa amin'ny dadany) - zava-bita izay nanosika bebe kokoa ny tenany fony kely.
Fantatrao ve?… Gunter Schuh dia nanolotra vola kely ho an'ny zanany lahy ho an'ny tanjona rehetra azony. Nanazava ny fomba nitrangan'ny zava-drehetra, Michael Bulling, filohan'ny baolina kitra ao amin'ny TSV Steinhaldenfeld, indray mandeha dia nanao ny fitantarany. Amin'ny teniny;
“Ny dadan'i Timo Werner no mpanazatra ny ekipan'olon-dehibe. Tonga hijery ny zanany lahy fito taona milalao tokoa izy.
Indray andro, nampanantena vola kely an'i Timo kely izy ho an'ny tanjona tsirairay. Heveriko fa nalahelo izy tamin'ny farany. ”
Ho an'i Gunter Schuh, ny tetika mandrisika toy izany dia niafara tamin'ny fanaovana fampiharana tena lafo tokoa. Izany dia satria nampatahotra ny zanany lahy valo taona (Timo Werner). Raha tamin'ny andro taloha, ny tifitra nataon'ny tanora dia matanjaka tokoa ary tsy nisy nahatakatra ny fomba fitendreny sy ny fihazakazahany haingana.
Timo Werner tantaran'ny tantaram-piainana- Tantara mankany amin'ny laza:
Raha nilalao tsara ho an'ny klioban'ny vondrom-piarahamonina any Stuttgart i Günther Schuh dia nanamarika fa nahaliana ny zanany lahy ny haino aman-jery Alemanina. Mba hahatonga azy hiomana bebe kokoa amin'ny ho avy, Günther Schuh dia nitondra an'i Timo- AGAIN- niakatra ny tendrombohitra- tamin'ity indray mitoraka ity, nahatonga azy nihazakazaka nandritra ny ora maro niaraka tamin'ny fampiharana baolina kitra lava. Fantany tsara fa liana tamin'ny zanany lahy ireo goavam-be VfB Stuttgart.
Taorian'ny fifampidinihana be dia be, dia nanaiky ny ray aman-drenin'i Timo Werner ny zanak'izy ireo Rising Alemanina hanatevin-daharana ny ekipa tanàna ao an-toerana VfB Stuttgart. Tao i Little Timo dia nitsangana tamin'ny laharan'ny ekipa tanora. Na dia nanana aza ny klioba Serge Gnabry ary Joshua Kimmich, Timo no mpilalao manokan'izy ireo manokana. Ny fampahalalam-baovao alemanina araka ny hita etsy ambany dia nanomboka nanenjika ilay zazalahy tamin'ny fahatanorany.
Nandritra ny diany niakatra, ny dadan'i Timo Werner dia nanohy ny paikady mandrisika ny zanany lahy hanana aingam-panahy na dia tamin'ny fotoana nilalaovany ho an'ny VfB Stuttgart aza. Tamin'ity indray mitoraka ity dia namboarina ny lalàna ary nifanaiky ny dadany fa tsy handoa afa-tsy ny tanjona azon'i Timo isa sy ny lohany ary ny tongony havia.
Amin'ny fiezahana hahatanteraka an'io, "Turbo Timo" izay nantsoina tamin'ny anaram-bosotra azy indraindray, dia nanao hetsika sarotra mba hahafahany maka isa amin'ny lohany sy ny tongony havia. Rehefa nandeha ny fotoana, dia nanjary mora loatra ho an'ilay zazalahy izany, ary hitany fa nalainy daholo ny volan'ny rainy.
Timo Werner Tantara mahomby:
Araka ny efa nampoizina, tsy niandry ela akory fa nahita ny fahitany ny fahombiazan'ny rainy i Timo, izay mpilalao baolina kitra tena mahay. Tanjona kendrena hahazoana fahafinaretana eo amin'ny sehatry ny fahatanorana, ny tanora dia nahaliana an'i RB Leipzig izay nahazo azy tamin'ny 11 Jona 2016. Herintaona taty aoriana dia nantsoina ho ao amin'ny ekipa nasionaly alemanina izy Joachim Löw- lampihazo nampiasainy hifaninana sy hamindra ny maherifon'ny fahazazany- Mario Gomez.
Ny marina dia, ny asan'ny Alemà RB Leipzig dia voamarika tamin'ny fanamarinana ny lova tamin'ny taonan'ny fahatanorany. Niditra tamin'ny vanim-potoana voalohany niaraka tamin'ny kliobany i Timo Werner, ary nahavita 21 isa tamin'ny lalao 31. miaraka Julian Nagelsmann, ny tanjony dia nahatratra ny 78- zava-bita iray izay nahasarika ny hazavan'ny Frank Lampard an'i London- Chelsea FC.
Toy ny tamin'ny fotoana nanavaozana ity tantaram-piainana ity, ny balafomanga RB Leipzig '(antsoina amin'ny anaram-bosotra) sy ny mpiara-miasa aminy amin'ny asa ratsy- Kia Havertz dia vonona hampalaza ny anarany any Angletera. Tsy isalasalana fa resy lahatra ny mpankafy Chelsea Football fa hahita fahombiazana any Angletera izy Frank Lampard. Ny sisa amin'ity Bio ity, araka ny filazantsika azy dia tantara ankehitriny.
Araka ny fomba fiteny…… Aorian'izay mpilalao baolina mahomby rehetra dia misy WAG mahafinaritra foana. Noho izany, teto dia tsy mandà ny zava-misy fa ny endrika mahafatifaty an'i Werner dia toa tsy hahasarika ireo mpankafy vehivavy te-hilaza ny tenany ho sipa, vady na renin'ny zanany na ny zanany.
Momba ny Timo Werner's Girlfriend:
Nandritra ny fotoana elaela, ny Striker dia niaraka tamin'ny modely fitaizam-batana Stuttgart Julia Nagler, hatramin'ny fahazazany. Timo Werner dia zokiny herintaona noho ny sakaizany- Julia Nagler. Sary etsy ambany, dia mpianatra tao amin'ny University of Stuggart izy taloha.
Julia Nagler, araka ny fantatry ny maro, dia olona tsy tia tena izay tsy manao afa-tsy ny manome fanohanana ara-pihetseham-po ho an'ny sakaizany na dia midika hoe mitazona ny ainy aza izany.
Ny fialan-tsasatry ny baolina kitra dia miavaka foana ho an'ireo mpivady satria matetika izy ireo dia hita amin'ny fitsangatsanganany amin'ny fahavaratra. Ny marina dia, Ny fitiavan'izy mivady dia voalaza fa mandeha mafy ao ambadiky ny fampitam-baovao.
Hanambady ny sakaizany ve i Timo?
Na eo aza ny fiarahako maharitra, ny andrasana amin'ny mpankafy dia ny mahita ireo olon-droa manambady. Na izany aza, ny toe-javatra misy amin'izao fotoana izao ao amin'ny fianakavian'i Timo Werner dia ny mety hitrangan'izany. Nomarihintsika teo aloha tamin'ity Bio ity momba ny dadan'ny Footballer sy ny reniny tsy nanaiky hamatotra ny fatotra nefa hiaina am-pifaliana. Mety ho izany no teo amin'i Timo Werner sy ny sipany Julia Nagler.
Timo Werner Fiainana manokana:
Angamba fantatrao ho mpikomy mahafaty ianao, saingy ahoana no ahafantaranao azy amin'ny lalao? Ny marina dia, Turbo Timo dia olona iray izay tena miahy ny endrika ivelany amin'ny endriny- tsy misy fitiavana afa-tsy ny fiharatana madio. Izy koa dia manokana fotoana betsaka amin'ny fotoanany ho an'ny asa fanompoana ambany, toetra tsara nianarany tamin'ny reniny.
Eto izahay dia holazainay aminao ny fomba andanian'ny Forward ny volany. Lavitra ny kianja filalaovana dia aleon'i Timo mandany ny volany mandeha any Etazonia hijerena ny NBA. Araka ny hita etsy ambany, mpankafy an'i Lakers tsy mivadika izy.
Fiara Timo Werner's:
Ho an'ny lehilahy Chelsea, ny fitiavana an'i Autos Alemanina dia mitohy. Tsy mahagaga raha ny tanànan'ny Alemanina any Stuttgart- toerana niavian'ny fianakavian'i Timo Werner no tranon'ny fiara- Mercedes Benz sy Porche. Ilay lehilahy RB Leipzig teo aloha dia aleony manao akanjo ambony akanjo mifanaraka amin'ny fiarany. Araka ny hita etsy ambany, ny safidin'ny fiarany dia mijanona ho Mercedes Benz. Izy koa dia mpankafy fiara mihazakazaka.
Mba hamakafaka ny hareny dia jerentsika aloha izay azony amin'i Chelsea. Ny karaman'i Timo Werner isan-taona any Chelsea dia manodidina ny £ 9,009,840.
Ny vola amin'ny karama, ny dokam-barotra ary ny fifanarahana fifaninanana dia mbola hijanona be na dia esorina aza ny trosany avy amin'ny fananany. Ho an'izany, azontsika atao ny manombatombana ny sandan'ny Timo Werner dia 29 tapitrisa dolara.
Araka ny voalaza matetika, ny tanjaky ny ankohonana, toy ny tanjaky ny tafika, dia eo amin'ny tsy fivadihan'izy ireo. Ity no vatofehizoro nananganana ny fianakavian'i Timo Werner. Ity lafiny iray amin'ny Bio ity dia hilaza aminao bebe kokoa momba ny ray aman-dreniny sy ireo mpikambana ao amin'ny reniny.
Momba ny renin'i Timo Werner:
Ny zavatra voalohany jerena momba an'i Sabrine Werner, ny renin'i Alemanina dia ny hoe mifanaraka tsara amin'ny zanany lahy Timo ny anarany. Ny renin'i Werner dia matetika nahazo mari-pankasitrahana noho ny anjara asany tamin'ny fiantohana ny zanany lahy nahavita ny fianarany.
Araka ny Bundesliga, Timo dia nahavita ny sekoly ambaratonga faharoa noho i Sabine Werner, ny reniny izay naniry ny hanana zanany latsaky ny lisea ny zanany lahy alohan'ny nahatongavany ho mpilalao baolina matihanina. Noho ny fikarakarany, Timo taloha tany an-tsekoly dia zaza ara-dalàna fa tsy mpianatra tsy mazoto. Tsy nahatratra ny antsasaky ny fotoam-pianarany ianao noho ny fanoloran-tena tamin'ny baolina kitra. Ny andraikitry ny reniny dia nahitam-bokany rehefa afaka nahazo diplaoma tamin'ny 2014 izy tamin'ny faha-17 taonany (mpilalao Bundesliga).
Momba ny rain'i Timo Werner:
Araka ny voamarika teo aloha, Günther Shoe, mpilalao baolina kitra amateur izay lasa mpanazatra taty aoriana dia mihoatra ny dadan'ny Geman fotsiny. Raha nahamarika ny niainany ny nofinofiny ho lasa pro, dia niditra tao amin'ny coaching ny dadany mahantra tamin'ny fahitana ny hampiorina ny zanany lahy any amin'ny toerana nialany. Soa ihany fa miaina ny nofinofin-drainy i Timo Werner.
Momba ny iray tam-po amin'i Timo Werner:
Aorian'ny fikarohana lalina dia takatsika fa ny Footballer no hany zaza naterak'ireo ray aman-dreniny- tsy manan-drahalahy na rahavavy.
Timo Werner zava-misy tsy fantatra:
Zava-misy # 1: Fanapahana ny karama sy fampitahana ny anglisy antonony:
Ity misy famakafakana izay azon'i Timo Werner noho ny fandaka baolina fotsiny teny an-tsaha.
Fotoam / Salary
Per Year £ 9,009,840 € 10,043,989 $11,865,779
isam-bolana £ 750,820 € 836,999 $988,815
Isan-kerinandro £ 173,000 € 192,857 $227,836
Isan'andro £ 24,714 € 27,551 $32,548
Isaky ny ora £ 1,030 € 1,148 $1,356
Isaky ny Minut £ 17 € 19 $22.6
Per faharoa £ 0.28 € 0.32 $0.37
Izany no nolazain'i Timo Werner nahazo tombony hatramin'ny nanombohanao ity pejy ity.
Ny salanisan'ny anglisy mahazo vola 29,009 isan-taona dia mila miasa mandritra ny 25 taona sy 7 volana hahazoana karama isan-taona an'i Timo Werner ao Chelsea.
Zava-misy # 2: Speed ​​facts:
Timo Werner indray mandeha dia nahavita 11.11 segondra taorian'ny nihazakazahany 100 metatra niaraka tamin'ny baolina. Izany dia nitranga nandritra ny taona faramparany tany am-pianarana. Noho io antony io dia nahazo ny anaram-bosotra hoe 'Turbo Timo' avy amin'ny haino aman-jery Alemanina izy noho io haingam-pandeha io.
Zava-misy # 3: Safidin'ny Gamers FIFA ho an'ny kariera:
Ny haingam-pandehan'ny mpilalao baolina kitra sy ny famirapiratan'ny tetika no teboka fivarotana lehibe indrindra eo aminy ary koa ny FIFA.
Zava-misy # 4: Halany ny tabataba:
Manodidina ny 2017, ny tovolahy iray dia nanana olana tamin'ny fifohana rivotra sy ny rivotra mivezivezy vokatry ny tabataban'ireo mpankafy mpanohitra.
Ny rivo-piainana feno fankahalana any Torkia dia namela ny Timo tsy nifantoka. Ho valin'izay, nanao fihetsiketsehana mafy ilay Mpanafika tamin'ny fametahana ny rantsan-tànany tamin'ny sofiny roa tamin'ny hafa mba hanakanana ny feo. Tsy nandeha izany ary nomena izy avy eo earplugs. Taorian'ny 31 minitra dia nahita ny tenany tsy teo amin'ny lalao i Timo.
Zava-misy # 4: Indray mandeha any Manchester United Fan:
Toy ny tamin'ny fotoana nanoratany ny Bio-ny, Timo Werner dia milalao ho an'ny Chelsea FC. Ny marina dia, tiany ny United, klioba iray izay tiany kokoa nilalao noho ny tantaran'izy ireo.
Zava-misy # 5: Fivavahan'i Timo Werner:
Raha tsaraina amin'ny anarany voalohany ianao dia afaka maminavina mora foana fa Kristiana hatrany am-bohoka izy. Timo dia anaran'ny zazalahy midika hoe “Voninahitr'Andriamanitra”. Ao amin'ny tanàna niaviany avy ny fianakavian'i Timo Werner dia 50% mahery ny olom-pirenena kristiana ary katolika no ankamaroany. Noho izany, misy fiovana lehibe ny Fivavahana Kristiana Footballer.
Anarana feno: Timo Werner.
Daty nahaterahana: Andro faha-6 martsa 1996.
Tanànan'ny fianakaviana. Stuttgart, Alemana.
Ray aman-dreny: Ray (Günther Schuh), Reny (Sabine Werner).
Ray aman-dreny manambady: Tsy manambady (toy ny tamin'ny 2020)
mpiray tam-po: Tsy misy Rahalahy sy rahavavy.
Haavo ambony any Feet: 5 metatra 11 santimetatra ny halavany.
fanabeazana: TSV Steinhaldenfeld sy ny lisea Stuttgart.
Karama any Chelsea: 9,009,840 £ isan-taona.
Net Worth: $ 29 tapitrisa.
fivavahana: Fivavahana Kristianina
Ny tantaram-piainan'i Timo Werner dia mampianatra antsika hino fa ny fananana tsy fitoviana sy fahatapahan-kevitra no fototry ny fahombiazana. Ary koa, ny maha ray aman-dreny manohana azy - toa ny dikan'ny hoe mikatsaka am-po ny tombontsoan'ny zanakao indrindra. Ny ray aman-drenin'i Timo Werner- Günther Schuh sy Sabrine Werner dia nanampy tamin'ny fahitana ny zanak'izy ireo nanatontosa ny nofinofiny araka ny hita ao amin'ny Bio. Ampahafantaro anay anay izay hevitrao momba ny lahatsoratray na ny Footballer ao amin'ny faritra maneho hevitra.
Daty efa namboarina: 20 septambra 2020